Vista's Colorful Planet: ချိုလဲ့ခိုင်
Labels: About me, Remembrance, Thoughts
စစ်မှန်သောသူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်သည် သေသည့်တိုင်အောင် ပျောက်ပျက်မသွားနိုင်ပါဘူးဟာ..
ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝိုင်းချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း မေတ္တာဖွဲ့...
စာများများရေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် ညီမ ဗစ်ရေ...
ကျေးဇူးပါမသက်ဝေ .. အနော်က
မမတို့ ခြေဖျား မမှီဘာဘူးလေ
ဟင် ရှာကြည့်မလို့ဟာ ဟိ
နာမည်ရင်းတော့ မထည့်ပါရစီနဲ့ ဟိ
ညီမလေးစာပြန်ရေးတာ ဝမ်းသာတယ်။ စာလေးကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်...
ကျေးဇူးပါ မမယ် .. အနော်က မရေးတတ်တော့ ၅ လနေမှ တစ်ပိုစ့်တက်တာ ဟီး။
၀တ္ထုလေး လာဖတ်တယ်။ စာအရေးအဖွဲ့က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ နှစ်သက်မိတယ်။ အဲ့လို ၀တ္ထုလေးတွေ ဆက်ရေးနော်။ အားပေးနေမယ်။ ချိုလဲ့ခိုင် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို သနားစာနာမိတယ်။
သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်က အတော်ကြီးသား။ အိမ်တွင်းရေး မပြေလည်မှုတွေကြောင့် လောကကြီးနဲ့ ကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့ လူငယ်တွေ....။ မမျှော်လင့်ဘဲ မဆိုးချင်ဘဲ လူဆိုးကလေးတွေ ဖြစ်သွားကြရတာ....။ ဖဘကျေးဇူးကြောင့် ငယ်ပေါင်းတွေ ပြန်တွေ့ကြတာတော့ ဖဘသုံးရတဲ့ အမြတ်တစ်ခုပဲနော်....
ကျေးဇူပါ မ jasmine နဲ့ မRose
( ပန်းတွေချည်းပဲ ) ဟိဟိ။
မချစ်ကြည် မွမွ ၊ ပျောက်နေတာကြာပေါ့ လာဖတ်တာကျေးဇူးနော်။
စာလာဖတ်တယ် ညီမရေ..၊ အစတစ်ကြောင်းကနေ အဆုံးထိကို တောက်လျှောက် ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ တာပဲ၊ ဇတ်ကောင်အဖွဲ့တွေ ကောင်းတယ်၊ ပူလောင်တဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ ကြားမှာ ရှင်းလင်းအေးချမ်းတဲ့ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်တွေက လှတယ်၊ ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်..။
ဟာ ကျနော်က စာရေးတာရော ၊ဓါတ်ပုံရိုက်တာရော ကိုညီလင်းသစ် ခြေဖျားမမှီပါဘူးဗျာ။
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါး)။
ဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တင် အရေးအသားပြေပြစ်တာကို သိလိုက်ရတယ်။
အကြောင်းအရာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ရေးတတ်တယ်
ဟုတ်တယ် ဝတ္ထုတိုလေးတွေ များများရေးရင် သိပ်ကောင်းမှာ
ဟိုနေ့တွေက မအားတာနဲ့ စာလိုက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး
ခုမှ အားလို့ စာတွေ လိုက်ဖတ်တာ
ဒီဝတ္ထုလေးဖတ်လိုက်ရတော့ စာရေးကောင်းတာကို တကယ်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရတယ် .
The post wrap me with tiny silk rope of sincere friendship.You are simply good writer.
ကျေးဇူးပါ မချေား)။
Thanks alot Gyidaw ..
ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ စရိုက် ပေါ်လွင်ပါတယ်။
ဒီစာထဲက ဂျူဂျူလေးက ကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ..အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ...ရင့်ကျက်နေပေမည့် အခြားအခြားသော လူရွယ်လေးများကတော့ သူတို့ကျင်လည်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အရောင်တွေ စွန်းထင်နေတာကို နားလည်ပေးစေလို တာပါပဲ။
လူသားတိုင်း စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနှင့် ရင့်ကျက်သောနှလုံးသား ရှိကြပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ဖြင့်
(အမက အသက်နဲ့ စာရင် အသိတရားက နောက်ကျနေတတ်လို့ သတိထားမိတာလေး ရေးခဲ့တာပါ။)
ဟုတ် ၊ မသီတာ အဲကျောင်းက ကလေးတော်တော်များများက အဲလိုများတယ်။ မိဘတွေအပြစ်လည်းပါတာပေါ့လေ ကျောင်းကြိုလာတာတောင်မှ ပွဲတက်သလားမှတ်ရအောင် ပြင်ကြဆင်ကြတာ။ တချို့ မိဘတွေတော့မပါဘူးပေါ့။
မရွန်းမီ မင်လာပါ။ အားပေးတာကျေးဇူးနော်။
မဗျစ်ရေ၊ မိုက်တယ်။ သို့ပေမယ့် ညီမတို့ ကျောင်းက အဲလောက်ကြီးတော့ မဆိုးပါဘူး.
မျက်ကျိတို့ နှစ်က လူလိမ္မာလေးတွေများလို့ နေမှာပေါ့ဟိ
အရေးအသားနဲ့တင်ဆက်ပုံကောင်းတယ်ဗျို့... ဒါပေမဲ့ တီတီစီက မိန်းကလေးတွေက ကျောင်းသူသစ်ကို ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ အဲဒိ ချိုလဲ့ခိုင်တို့ Batch ဖြစ်မှာပါ... မဗေဒါတို့ Batch မှာတော့ ကျောင်းသူသစ်ဆိုရင် သူ့ထက် ကိုယ့်ထက်အပြိုင်လိုက်မိတ်ဆက်နေကြတာ... ၁၀တန်းပြီးတော့ ဒေါ်ဥာဏစာရီမှာ သီလရှင်ဝတ်တာလဲတူပြန်ပြီ... တီတီစီရော သီလရှင်ကျောင်းရော တူနေပါလား... ၁၀တန်းပြီးတော့ YES speaking သင်တန်းရော တတ်ဖြစ်သေးလား... တူများနေမလားလို့ပါ... အဟီး....
YES တော့ မတက်ဖြစ်လိုက်ဘူး မဗေဒါရ ဟိဟိ။
အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ (ချိုလဲ့ခုိုင်ရော ဦးစန်းညွန့် ၁ ရော)စာအရေးအသားကပြေပြစ်တဲ့ အပြင်ဆက်ဖတ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နေတယ်။ ပြီးတော့ သိပ်လည်း သဘာဝကျတယ်။ မချီးကျူးဘဲကို မနေနုိုင်ဘူးနော်။
ကျေးဇူးပါ အိုင်အိုရာ ဟင်းတွေလည်း များများချက်တင်ပါအုံး ငမ်းချင်လို့ 
စိတ်ဝ်ငစားသွားလိုက်တာများ ဘောစ့်ဘေးကလာပြီး ၂နာရီထိုးပြီနော် လို့တောင်သတိပေးရပါတယ်
အသာနေ စမ်းဘာ ဒီမှဖတ်လို့ မပြီးသေးဘူး လို့ ပြန်ပြောလိုက်လေ မဒိုး ဟိဟိ
ပါ အခုတော့သူဆုံးတာ၇လလောက်ရှိသွားပါပြီ သူ့အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့တူလိုက်တာ